Nduzi nke Mbido na Ahịa Ọdịnaya | Martech Zone
Ntụkwasị obi na ikike… ha bụ naanị mkpụrụokwu abụọ dị n'etiti usoro azụmaahịa ọdịnaya, n'echiche m. Dika ulo ahia na ndi ahia na elele anya na ntaneti ka ha nyocha ahia na aka gi, ikekwe ha ekpebiela izu ahia. Ajụjụ bụ ma ha ga-azụta gị. Ahịa ọdịnaya bụ ohere maka ịkwado ntụkwasị obi na ikike ahụ n'ịntanetị.
Ichikọta ihe onwunwe abụọ na usoro gburugburu usoro ịzụ ahịa ọdịnaya gị ga-enyere gị aka ịmepụta mmemme na-aga nke ọma nke na-atụle ma na-arụpụta nsonaazụ. Ihe omuma ihe omuma a site na Demetric Metric na-enye usoro maka ime nke a.
Iji mụtakwuo banyere ihe ahịa ọdịnaya bụ, otu ọ nwere ike isi baara nzukọ gị uru yana otu esi amalite iji usoro a iji kwalite ụlọ ọrụ gị, lelee ihe ndị a Ntuziaka maka ịzụ ahịa Genius: Ahịa Ọdịnaya infographic:
Tags: ikikeiguzosi ikentọala ahịa ọdịnayausoro ahia ahiachọọ metricire ahiaedu ọgbọagụ anyatụkwasị obi
Mee 20, 2013 na 8: 33 AM
Whoa. Ozi bufee, mana uru bara uru.
Mee 20, 2013 na 8: 42 AM
Ọ bụ nnukwu anụ mmiri! Ma nnukwu ozi nke ozi na usoro.